Dr. Tint Swe's Writings: Infective conjunctivitis မျက်စိကျိန်းခြင်း
1. ဆရာခင်ဗျား ကျနော့သားလေးက ခုဆို ၂ လကျော်ရှိပါပြီ။ သားလေး ၃ရက်သားလောက်ကစပြီး ဘယ်ဘက် မျက်လုံးက မျက်ဝတ်လေးတွေထွက်ပြီး တခြားထောင့်ကနေ မျက်ရည်လေးတွေစီးစီးကျနေပါတယ်။ ခဏခဏ သုတ်ပေးရပါတယ်။ တလလောက်ထိ မပျောက်လို့ ကလေးအထူးကုနဲ့ပြတော့ မျက်စဉ်းဆေးပေးပါတယ်။ ၅ ရက်ဆေးထည့်ခိုင်းပါတယ်။ မသက်သာလို့ မျက်စိအထူးကုဆီ ပြန်လွဲပါတယ်ဆရာ။ မျက်စိဆရာဝန်ကလည်း နောက်ထပ် မျက်စဉ်းဆေး ၂ မျိုး ပေးပါတယ်။ တပတ်ထည့်ခိုင်းပါတယ်။ ခုထိမသက်သာပါဆရာ။ ဘာကြောင့် ကလေးငယ်လေးမှာ မျက်ဝတ်ထွက်တာလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလား။ ကလေးက တအားငယ်သေးတော့ မျက်စဉ်းတွေပဲခပ်ခိုင်းနေလို့ ဆရာဝန်ဆီလည်းထပ်မသွားတော့ပါ။
2. ဆရာရှင့် ကျွန်မသမီး ၃ နှစ် ၁ လကျော်နဲ့ သားသား ၂၇ ရက်သားတို့ အခု မျက်ချီးတွေထွက်နေပါတာ။ မျက်လုံးတစ်ခုလုံး ပိတ်နေအောင်ထွက်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ aircon နဲ့ နေတာ အပူ အအေးမမျှလို့လား မသိဘူးဆရာ။ အခု သားသားကို မိခင်နို့ရည်ကို မျက်စိကို ခပ်ပေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေကို ဘာမျက်စဉ်းခပ်ရမလဲ ဘာဆေးတိုက်ရမလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးပါရှင့်။ ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ မြန်မြန် အကြောင်းပြန်ပေးပါဆရာ။
အဖြစ်များတယ်။ တဖက်တည်း၊ နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ ကူးစက်တယ်။ မျက်စိပန်းရောင်ကနေ နီရဲနေမယ်။ အနေရခက်မယ်။ ရောင်နေမယ်။ နာမယ်။ ကြည့်မကောင်းဘူး။ တချို့ကဆေးမလိုပဲပျောက်မယ်။ မရသေးရင်၊ ဆိုးရင် ပိုးသေဆေး မျက်စဉ်းခပ်ရမယ်။ ပိုးကြောင့်မဟုတ်ပဲ အလာဂျီကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ပန်းရောင်မျက်စိဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးကြောင့်မဟုတ်ပဲ တခုခုဝင်လို့ ဥပမာ ရေ၊ ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဖုန် ဝင်လို့ကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အများဆုံးဖြစ်တာက ဗက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေဖြစ်စေတယ်။ အအေးမိတာကနေလဲ ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျက်စိနေရာနာတာ၊ အလင်းရောင်ကိုမကြည့်နိုင်တာ၊ မျက်စိမှုံလာတာ နဲ့ နီရဲလွန်းလာတာဆိုရင် မျက်စိဆရာဝန်ကိုပြပါ။ ဝက်သက်ပေါက်ရာကနေလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ မိဘတွေဆီကနေ ဂနိုရီးယားပိုး ကူးစက်ရာကနေ ဖြစ်တာကဆိုးတယ်။ စာတပုဒ်ရေးထားပါတယ်။ Herpes virus ရေယုံဗိုင်းရပ်စ်ကနေလဲဖြစ်တယ်။ STIs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ မွေးရာပါဖြစ်တာက chlamydia ကလာမိုင်ဒီးယား နဲ့ gonorrhea ဂနိုးရီးယားတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
တချို့မှာ ဆေးမလိုတတ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ ဝါဂွမ်းစလေးကို ရေဆွတ်သုံးနိုင်တယ်။ လက်ကို မကြာမကြာ ဆေးပေးပါ။ လက်ကိုင်ပုဝါ သီးသန့်သုံးပါ။ မျက်ကပ်မှန်တပ်ရသူဆိုရင် ထုတ်ထားပါ။ lubricant eye drops ချောဆီပါ မျက်စဉ်းခပ်ပါ။ လက်ကိုင်ပုးဝါအစား တစ်ရှူးပေပါသုံးပါ။ စနစ်တကျစွန်ပြစ်ပါ။ မျက်ကပ်မှန်သုံးသူ ဖြုတ်ထားပါ။ မျက်နှာသုပ်ပုဝါ မျှဝေမသုံးပါနဲ့။ လက်ခဏခဏဆေးပါ။
အလိုလိုပျောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးမလိုသလောက်ပါ။ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ ရေအေးအေးသန့်သန့်သုံးပါ။ Lubricant eye drops ရိုးရိုးမျက်စဉ်းခပ်ပါ။ မရသေးရင် Chloramphenicol 1% ကလိုရမ်ဖီနီကောကို အသုံးများတယ်။ ကော်မျက်စဉ်း အနေနဲ့လာတယ်။ မျက်စဉ်းရည်ဆိုရင် ၂ နာရီ ၁ ကြိမ်၊ ပဌမ ၂ ရက်နဲ့ နောက်ရက်တွေမှာ ၄ နာရီ ၁ ကြိမ်၊ ၄-၅ ရက် ခပ်နိုင်တယ်။ Fusidic acid မျက်စဉ်းလဲကောင်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေအတွက်ပိုသင့်တယ်။ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်ခပ်ပါ။
မျက်စိကျိန်းနေတာက မပျောက်ပဲဆက်ဆိုးလာရင် မျက်ကြည်လွှာရောင်တာဖြစ်လာရင် ဆိုးတယ်။ Keratitis ခေါ်တယ်။ မျက်စိကွယ်နိုင်တယ်။
• Allergic Eye diseases အလာဂျီကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊ = Antihistamine + Corticosteroid
• Bacterial Keratitis မျက်စိအကြည်လွှာရောင်ခြင်း၊ = Cefazolin 100 mg/ml and Tobamycin 15 mg/ml, Ciprofloxacin3mg/ml, Ofloxacin3mg/ml
• Gonococcal Corneal ulcer ဂနိုပိုးကြောင့် မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်း၊ = Ceftriaxone 1-2 Gm IM x5days + Erythromycin or Bacitracin E/o
• Herpes Simplex Keratitis ရေယုံပိုးကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊ = Acyclovir 200-400 mg5timesaday Orally ကော်တီဇုန်းမပေးရ၊
• Gonococcal Conjunctivitis ဂနိုးပိုးကြောင့်မျက်စိနာခြင်း၊ = Ceftriaxone 1 Gm IM + Erythromycin or Bacitracin E/o; Chalamydial (Trachoma) = Tetracycline/Erythromycin
• 250 mg QID Orally or Doxycycline 100 mg BD x 3-5 weeks or Azythromycin 20 mg/kg stat + Surgery for Entropion မျက်တောင်မွှေးစိုက်ခြင်းအတွက်ခွဲစိတ်ရန်၊
• Viral Conjunctivitis ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊ = Sulfonamide + Prednisolone 0.125% QID